शनिबार, आषाढ ५, २०७८
कोरोना निको हुनेबित्तिकै आफ्नो बुरुस र जिब्री फेरीहाल्नुहोस ।
तपाईं हालैमात्रै कोभिड १९ बाट निको हुनुभएको हो भने पहिलेभन्दा बढी सावधान हुनैपर्छ ।
सबभन्दा पहिला त तपाईं दाँत माझ्ने पुरानो बुरुश तत्कालै फालिहाल्नुस् । नयाँ टूथब्रश प्रयोग गर्दा व्यक्ति पुनः संक्रमित हुने सम्भावना घट्छ अनि एउटै वाशरूम प्रयोग गर्ने परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि संक्रमण हुन पाउँदैन ।
त्यसो त सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आएका मानिसले पनि निको भए पनि बुरुश बदल्दा राम्रो हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । अझ कोभिड भएको छ भने र लक्षण देखिएको २० दिनपछि टूथब्रश र जिब्री (टंग क्लीनर) बदल्नुपर्छ ।
दाँत माझ्दा टूथब्रशमा ब्याक्टेरिया बसिरहन्छ र पुनः संक्रमण गराउन सक्छ । त्यसको रोकथामका लागि धेरैजसो मानिस माउथवाशले गार्गल गर्छन् । त्यसले मुखमा रहेको भाइरस मार्छ । माउथवाश छैन भने तातो पानीले कुल्ला गर्नुस् । दिनमा दुईपटक ब्रश गरेको राम्रो हुन्छ ।
जनवरी महिनामा ब्राजिलका अनुसन्धाताहरूले कोभिड संक्रमण र मुखको स्वच्छताको प्रभाव बुझ्नका लागि एक अध्ययन गरेका छन् । अध्ययनले टूथब्रशलाई ब्याक्टेरिया फ्री राख्नका लागि ओरल हाइजिन जरूरी रहेको देखाएको छ ।
द जर्नल अफ इन्फेक्सियस डिजीज जर्नलमा अध्ययन प्रकाशित भएको छ ।
मेलम्ची नदीमा बाढी आउन थालेको खबर पाएपछि स्थानीय सरकारका एक जना जनप्रतिनिधिले लिएको पहलकदमी।
बृद्धअबश्थाका सासुससुराको राम्रो स्याहार सुसार गर्ने बुहारीहरु संमानित ।
पठाओ राइडरले कम्पनीको ज्याकेट र ट्राउजर लगाउनु नपर्ने
आज सबेरैको लमजुङ भूकम्प : घर भत्किए, केही स्थानीय घाइते
प्रसिद्ध खबर /कान्तिपुर
आज सीता(जानकी ) उत्पत्ति दिवस (जयन्ती) मनाइँदै
आज घोडेजात्रा , काठमाडौको टुडिखेल र पाटनको बालकुमारीमा मनाईदै ।
आज वसन्त पन्चमी अर्थात सरस्वती पुजा ,देशका सरस्वती मन्दिर र स्कुलहरुमा भब्य मनाईदै ।
उर्वर मण्डनले जन्मायो अर्को धुरन्धर कथाकार कश्यप पौडेल , वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले भावुक बनाए ।
प्रसिद्ध खबर /कृष्ण आँशुक
नारी दिवस बिशेष : श्रीमान बोकेर दौडने प्रतियोगिता !
शारीरिक ब्यायाम र मनोरञ्जन-महाबिर पुन र उहाँका साथिबिचको भिडन्त ।
‘सेल्फी विथ डटर’ दिवस आज मनाइँदै, एक हजारभन्दा बढीले पठाए सेल्फी !
कोरोनाबाट मुटुरोग विशेषज्ञ डा. विकास सुवेदीको निधन
के हो चुत्रो ? यस्तो छ चुत्रो खानुको फाइदा
अनाथ बालबालिकाको साझा घर शिलान्यास ,सेवक नेपाल दाताहरुमा हात फैलाउदै ।
"सडकमै स्वाद लिनुहोस " - Mr . Thela आजबाट संचालनमा ।
नेपाली युवती बैअबु राईले सुरु गरिन् फेसबुक मुख्यालयमा सफ्टवेयर इन्जिनियरको जागिर
गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कुमारीपाटिका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ पक्राउ ।
आलुको खानी ,एकै जिल्लाबाट डेढ अर्बको आलु बिक्री